March 1, 2018 Aagan Post0Comments
अर्थमन्त्री भएपछी बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तरवार्तामा घरजग्गा, सेयर बजारमा लगानी बढ्न जादा अहिले को तरलता समस्या निम्तिएको बताएका थिए। यो संगै सामाजिक संजालमा उनको ब्यापक आलोचना एबं समर्थन भएको छ ।
दुर्गानन्द भन्नु हुन्छ-
त्यसो भए सेयरमा लगानी बन्दगरेर उद्योगधन्धा , कलकारखाना , बिधुत उत्पादन जस्ता बिकास निर्माणका कामहरू बन्द गरेर बिदेशमा श्रम बेच्न जानु र नेता र तिनका कर्याकर्तालाई tax उठाएर रजाइँ गर्नदिनु नै उत्पादन मुलक क्षेत्र होला नि , होइन ?
सामाजिक संजालमा सक्रिय हुनुहुने ज्याेतिदाहाल भन्नु हुन्छ-ठिक्क अनुमान गरेर आफ्नै रकम लगाउनुलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन तर जोखिम लिएर ऋण लिंदै लगानी डगर्नु अनुत्पादक मात्र हैन जोखिम पनि हो । शेयर अनुमानमा आधारित लगानी भएकोले सबैको अनुमान एकै हुन्न अनि यो घट्ने कि बढ्ने हुन्छ । यसर्थ वास्तविकता हेरेर लगानी गर्दा आत्तिनु पर्दैन । जोखिम लिनेले लगानी गरुन तर अनावश्यक रोइ कराई आवश्यक छैन । घर /गोठ बनाउदा त सकेसम्म भित्तामा बनाइन्न । लगानी गर्दा कुन भित्तो कुन छेउ हेर्नुपर्दैन ?
प्रमोद के सी भन्नु हुन्छ-
नर्भिककाे डाक्टरले देब्रे भनेकाे दाईने खुट्टा चिरेकाे ३ दिन भाकाे छैन अर्काे डा. ले अनुत्पादक क्षेत्र पाे भन्छ बा ८ किलास वाला म
१८८१ हाम्राे पालामा भन्दैगर्दा ८८१ अाउँदा कतार जाम कि बनारस ?
त्यस्तै देबेन्द्र रिजाल भन्नुहुन्छ – पुर्बाधार बिकासमा लगाउनु पर्ने कर्जा सेयर मार्केटमा जानू अनुत्पादकनै हो । हकप्रद शेयरको आपूर्ति र उच्च ब्याजदरले घटेको सेयर बजार अर्थमन्त्रीको बोलिले बढाइ दिनु पर्ने , कस्तो बजार हो यो ।
त्यस्तै हाकु काले बिराज भन्नुहुन्छ – अर्थमन्त्रीको कुरो आफै उत्पादक लाग्यो, अब चाहि साइकल चड्ने को दिन आउला जस्तो छ, मन्त्रि ज्यु लाइ साइकलमा सरर देख्न पाइएला जस्तो छ ।
← सालपा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुजी पु¥याउने, (आइपियो) कहिले आउला ?
माइक्रोफाइनान्सको सेयर आज बाट बिक्री खुला, कहाँबाट आवेदन दिने ? →